iOS 11 inogona kusanganisira kuita kwekuvhura multitasking pane iyo iPhone | IPhone nhau
iOS 11 inogona kusanganisira kuita kwekuvhura multitasking pane iyo iPhone
Zvishoma nezvishoma zuva racho rave kusvika apo Apple ichatiratidza iyo inotevera iPhone uye izvo zvichazombobatana nekuburitswa kweiyo iOS 11, iyo vhezheni itsva yatanga tichiedza kubva muna Chikumi uye yatove mune yayo yechinomwe Beta kune vanogadzira. Kunyangwe zvichiratidzika sekuti zvinyorwa zvitsva zvave kutoonekwa, Apple inogara iine ace kumusoro kwayo sleeve yekuratidzwa kweiyo iPhone, uye zviratidzo zve multitasking uye yekuzivisa nzvimbo inogona kuve imwe yemakadhi iwayo.
Mumwe mugadziri anga achi "diving" mune zvakadzika zveIOS 11 nekodhi yayo, uye Iwe wawana maviri mabasa asina kuvhurwa asi anogona kunyatso kuoneka mune yekupedzisira vhezheni yeIOS 11, uye izvo zvinokanganisawo zvinhu zviviri izvo vashandisi vazhinji vasingaone zvakakwenenzverwa: Iyo Inodzora Center uye kuita zvakawanda. Tinovaratidza pazasi.
Chekutanga chezviwanikwa isu chatinogona kuwana muvhidhiyo iyi chinosanganisira Control Center mukati meNotification Center (uye pamwe nekiyi skrini). Kuendesa Notification Center kubva kune chero skrini, kutsvedza kubva kurudyi kuenda kuruboshwe iyo Center Center yaizoonekwa, nemabhatani ayo ekuti uite iyo WiFi, Bluetooth nevamwe. Parizvino kana isu tikadaro, izvo zvinoita senge kwatiri iko kushandisa kamera.
Izvi zvakare zvinonakidza pic.twitter.com/JdYDhZDkev
- Guilherme Rambo (@_inside) August 21, 2017
Yechipiri inotonyanya kunakidza, sezvo vazhinji vedu tichipotsa chiratidzo chekuita Force Kubata kuvhura multitasking. Parizvino Apple inotimanikidza kuti tinyore pa bhatani rekutanga, pasina imwe nzira. Muvhidhiyo tinogona kuona kuti sei kusvetuka uchikwira kubva pasi pechidzitiro kunovhura multitasking, ichiratidza iyo Center Center kurudyi. Izvozvi chiito icho chinovhura zvakananga iyo Center Center.
Iyi vhidhiyo yekupedzisira inoitawo pfungwa zhinji neiyo nyowani iPhone 8 iyo inoshaya bhatani repamba, uye ichi chiratidzo chekuita zvakawanda chinoita kunge chine musoro pane kungobaya-kaviri pane bhatani repamba pachiratidziri. Ichowo hunhu hwakafanana hune multitasking pane iyo iPad ine iOS 11 izvozvi, kunyangwe mune ino kesi multitasking uye iyo Center Center inoonekwa pachiratidziro chimwe chete, ichipiwa saizi hombe yechinhu ichi. Tichaona kana ichingova kodhi yakasara iyo Apple yakasiya muIOS 11 kana kana iwe uri kunyatso kuyedza izvi maficha kuti uburitse mune ramangwana shanduro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 inogona kusanganisira kuita kwekuvhura multitasking pane iyo iPhone
Iyo iPhone 8 ichave iine Kubata ID kwakabatanidzwa muApple logo
Ming-Chi Kuo anoti Apple iri pamberi peQualcomm mu3D yekuona tekinoroji